नेपाली बजारमा आज प्र’तितोला कतिले घ’ट्यो सुनको मुल्य? हेर्नुहोस्:: Mero Desh
नेपाली बजारमा आज प्र’तितोला कतिले घ’ट्यो सुनको मुल्य? हेर्नुहोस्
Published on: २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०५:३६
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य थप ५०० रुपैयाँले सस्तिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बिहीबारको तुलनामा सुन प्रतितोला ५०० रुपैयाँले घ’ट्दै शुक्रबार ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा झ’रेको हो । यस्तै, आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत ५००
रुपैयाँले नै घ’ट्दै ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ । यता, चाँदीको मूल्य समेत अधिकतम २० रुपैयाँले घ’ट्दै विहीबार प्र’तितोला एक हजार २६५ रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि,, पछिल्लो समय पुराना हिट गीतको विभिन्न भर्सनमा ल्याउने क्रम जारी छ । यस्तैमा पुरानो फिल्म ‘रहर’को चर्चित गी त ‘टुङ्नाको धुनमा ’ पनि पन्जाबी भर्सनमा आएको छ । गायक इन्द्रजि त मिजारको स्वर, तुलसी घिमि रे र कुसुम गजमेरको शब्द रहेको गीतमा संगीत रन्जित गजमेरको संगीत रहेको छ ।
गीतको पन्जाबी भर्सन गायक लकी सिद्धुले गाएका हुन् । गीतको भिडियो संसार ब्ल्ग प्रोडक्सनले निर्माण गरेका हुन् भिडियोमा प्रज्वल भट्टराई , उत्सव ढुङेल, गेम्मा र ग्रातसी एलाको अभिनय रहेको छ ।भिडियोमा गीतलाई जि एन एस जोन्नीले निर्देशन गरेका हुन् ।